Maita upombwe padunhu . . .Mwana akapfimba amai – Makuhwa.co.zw
Maita upombwe padunhu . . .Mwana akapfimba amai
MURUME wekwaMusana, kuBindura, svondo rapera akaripiswa mbudzi mbiri nedare rasadunhu weko mushure mekukonwa nemhosva yekupfimba amai vake.
Asi murume wemubhuku rekwaChaka uyu anoti kunyangwe zvake akaripiswa mushure mekubatwa nemhosva iyi, haana kumbobvira apfimba amai, mudzimai wababamudiki vake, asi kuti vakamumhan’arira kudare iri nechinangwa chekuda kuhwanda nyaya yekuti ainge avabatikidza vaine chikomba – muporofita wekuchechi kwavo.
Peter Matanda Mangwende (44) akamiswa mudare iri nemusi weMugovera wakadarika ndokubatwa nemhosva yekukanda shoko rerudo kuna amai vake, Netsai Zabron (30).
Sadunhu Chikosha, VaElisha Chidziva (62), vanoti dare ravo rakawana mwanakomana uyu aine mhosva yekupfimba amai vake, izvo zvavanoti chipini mudunhu ravo.
“Vaviri ava ndiamai nemwana chaivo, ndiwo anonzi mashura padunhu. Peter ndakamumisa mudare rangu tikamubata nemhosva yekupfimba amai tikamuti abhadhare mbudzi mbiri dzekuripa amai vake, Netsai Zabron.
“Iyi inyaya yekutanga muno yatinofanirwa kutsindidza vechidiki zvikuru kuti vasazviregerere vachirasa tsika kusvika pakadaro,” vanodaro Sadunhu Chikosha.
Murume uyu anonzi akapihwa kusvika musi wa2 Kubvumbi kuti ange abvisa zvipfuyo zvekuripa izvi kudare.
Patsika dzevatema vemuno, amai munhukadzi angava munin’ina, mukoma kana tete vekumusha kwaamai vakakuzvara kana kuti mukadzi wemukoma kana munin’ina wababa. Vose ava vanoremekedzwa zvakafanana.
Zabron mudzimai waTsikai Matanda Mubvumbi (44), uyo anove babamudiki vaPeter.
Zabron anonzi aipota achienda kunoshanda mubindu raPeter mabasa akasiyana apo aibhadharwa nemuriwo kana nezvimwewo zviwanikwa.
Nekudaro zvinonzi mwanakomana uyu akazowana mukana wekuva padyo naamai vake apo akatanga kuvataurira mashoko erudo achiti vadanane asi ivo vachiramba.
“Peter anonzi akatosvika pakudura kuna amai ava kuti anovada zvakaomarara zvekuti aiva akazvipira kuvaitira zvose zvavanoda muupenyu. Akambovatengera juice card refoni iro vakatambira kuti vazoshandisa seumboo. Paairidza nhare kwavari, vakasvika pakuita kuti anzwikwe nevamwe vaiva nemudzimai uyu avo vakapupura mudare kuti Peter aitsvaga rudo kuna amai vake,” vanodaro sadunhu ava.
Vanoti Peter mudare iri aive nemashoko ake ekuzvidzivirira ayo vasina kuda kutambira.
“Mukuzvidzivirira, Peter akati amai vake ava vaimupomera mhosva iyi nekuti vaida kuhwanda nyaya yavo yaanoti akavawanikidza vakabatwa nemuporofita wekuchechi kwavo muchiuno. Anoti akavawanikidza mumba apo muporofita aive akatopinza ruwoko rwake murokwe ravo nemuchipfeko chavo chemukati iye akapihwa $10 sevharamuromo iyo akaramba,” vanodaro Sadunhu Chikosha.
Vanotizve dare ravo harina kutambira mashoko aya nekuti pakange pasina umboo hunogutsa.
“Ndiwo anonzi makunakuna chaiwo aya. Iyambiro yangu huru kuti vanhu ngavaremekedze chivanhu chedu nehukama, tikarega kudaro tinoenda kumawere,” vanodaro.
Zabron akaudza dare nezvekukandwa mashoko erudo naPter achiti akashamiswa nazvo zvikuru.
“Ndakavhunduka zvikuru kunzwa mwana achiti anondida, achitoda bonde neni. Akatanga achiita zvekufona kuzosvikira abuda pachena. Ini kuti nditaurire muroora wangu mudzimai wake zvakandinetsa kusvikira ndakazozivisa murume wangu ndokuzokwidza nyaya kudare rasadunhu,” akadaro Zabron.
Anoti imwe nguva Peter aiita zvekuba muriwo kumudzimai wake achinomupa senzira yekumukwezva kuti vadanane.
Peter akaramba kuti akakanda amai vake shoko rerudo.
“Mhosva yangu ndeyekuti ndakawanikidza amai vaine chikomba chinova muporofita wekuchechi kwavo, yeChiedza Chevatendi. Vaive vakagara pabhenji husiku muporofita akaisa ruwoko mudhirezi raamai, mukati chaimo mebhurugwa.
“Hwaiva husiku, baba vaenda kunogeza. Muporofita uyu akandikumbira ruregerero akandipa $10 yevharamuromo iyo ndakaramba,” akadaro.
“Ini handina wandakataurira nyaya iyi kunze kwemudzimai wangu sezvo ndaitya kuparadza imba yababa vangu. Asi amai nemuporofita vakazoronga kunditangira zvinova izvo zvakazoitika,” akadaro Peter.
Mudzimai waPeter, Ruth Mutandwa (36), anoti akaudzwa nemurume wake nyaya yekuti akawanikidza amai vaine chikomba muporofita.
“Murume wangu akasvikonditaurira kuti akanga awanikidza amai vaine chikomba akatya kuzivisa baba kana mumwe munhu. Ini zvakare ndakaenda ndichida kuchera mvura kumba kwaamai baba vasiko ndikasvikonzwa mubhedhuru muchitaura izwi rechirume, amai varimo mumba naiye muporofita uyu.
“Ndakapinda mukicheni ndikawana kababamudiki karimo kachiti kaiva karambidzwa kupinda mubhedhuru. Ndakazovaona vave kubuda mumba mushure memaminetsi 20 iye muporofita achitevera ari mumashure,” anodaro Ruth.
Murume waZabron, Tsikai Matanda, anoti akashamiswa zvikuru kunzwa kuti mwana wake aida rudo kuna amai vake.
“Zvakandishamisa zvikuru kuti mwanakomana wangu, uyo anofanirwa kunge achichengetedza musha wangu, ndiye ave kutsvaga rudo kuna amai vake chaivo. Ndakanzwa hasha,” anodaro.
VaClaudious Matanda (39), avo vanova baba kuna Peter, vanoti zvakaitwa nemwana uyu zvakavavhundutsa semumhuri.
“Mwanakomana uyu akaratidza kutishora zvikuru semhuri yekwaMatanda. Asi tinotevedza chirango chakapihwa nasadunhu vedu VaChikosha,” vanodaro VaClaudious Matanda.
Zvichakadai, Peter anoti anoda kupihwa mumwe mukana wekudzokera mudare nenyaya iyo yaanoti haina kufambiswa zvakanaka.
Zvisinei, Sadunhu Chikosha vanonzi vakamuti kana asina kugutsikana nemutongo wavo, vanogona kumupa tsamba yekuenda kwaMambo Musana kuti anotongwazve izvo anonzi akaramba.
Related Topics:MURUME wekwaMusanaMwana akapfimba amai
Vakasara nebhokisi chitunha chatorwa